‘Neymar waa NACAS lacag iyo magac doortay”. – Gool FM
‘Neymar waa NACAS lacag iyo magac doortay”.
Kaafi August 7, 2017
(Rosario) 07 Luulyo 2017. Tababbarihii hore ee Argentina Angel Cappa ayaa weerar afka ah ku qaaday Neymar waxa uuna sheegay in sidii uu go’aanka uu ugu biiray Paris Saint – Germain at tahay mid aan la qaadan Karin.
“Waa wax laga xumaado oo niyad jab ah maadama uu kubadda cagta ka doortay lacag iyo caannimo,” ayuu Cappa u sheegay Raadiye Argentina ka hawlgala oo uu u warramayey.
“Neymar waxa uu ahaa shaqsi fure u ah Barcelona. Xittaa ka muhiimsan Messi? Hadii waxa uu u tagay tani sabab u noqon karo waa NACAS xaqiiqdiina wey I murugo galineysaa.”
Cappa waxa uu ku daray in uu Messi u arko ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan.
“Cristiano waa mid ka mida gool dhaliyeyaasha dunida ugu wanaagsan ee aan arkay laakiin ciyaarta Messi waa wax GAAR AH wuuna dhaliyaa goolal kuwiisa le’eg am ka badan. Aniga ahaan waa ciyaaryahankii ugu wacnaa dunida abid.”
XOG: Manchester City oo u hanqal taageysa Sergio Busquets
Ousmane Dembele oo qarka u saaran ku biirida Barcelona